အသည်းတွေ၊ အူတွေယားသွားစေမယ့် ကြောင်လေးတွေရဲ့ ချစ်စရာ ပုံရိပ်လေး တွေ – Trend.com.mm
ကြောင်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေ ဒီပုံတွေကိုကြည့်ပြီးရင် အသည်းတွေ၊ အူတွေယားပြီး ချစ်လို့ကိုဆုံးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီကောင်ကြီးတွေ ၀ဖြိုးပြီး ဒီလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာ … ချစ်မိတာ သင်တို့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးစားကွဲပြားပြီး ကြောင်တောင်တောင်နိုင်တဲ့ သူတို့ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြောင်ချစ်သူများရှုစားကြကုန် …
A post shared by りゅう爺@ぶさお。1世 (@tanryug) on Jan 13, 2018 at 5:22pm PST
ရုပ်တည်နဲ့ မုန့်တီ စားနာ..
အိပ်တော့မယ်… မနှောင့်ယှက်နဲ့ … -_-
ဘာလို့ နာ့ ကိုအစောကြီးနိုးတာလဲ.. !!
ဒီလိုအိပ်တတ်ရင်တော့ အကောင်ပဲ… အပျင်းထူတဲ့ကောင် xD
A post shared by Rie (@riepoyonn) on Oct 7, 2017 at 4:24am PDT
A post shared by 🇰🇷GH.Lee 🎗 (@gold_h) on Aug 10, 2016 at 7:18am PDT
Drama ဇာတ်ကားအသစ်မှာ အတူတွေ့မြင်ရမယ့် Suzy နဲ့ Nam Joo Hyuk